News Collection: दस आकर्षक महिला
दस आकर्षक महिला
१ माल्भिका सुब्बा
माल्भिका सुब्बा आकर्षक महिलाको सर्वेक्षणमा गुणात्मक फड्को मार्दै नम्बर वानमा उक्लिएकी छिन्। सन् २००२ की मिस नेपाल माल्भिका १० वर्षपछि पनि उत्तिकै सुन्दर देखिनु तथा बौद्धिक रूपमा पनि आफूलाई नियमित अपडेट गर्दै जानु उनलाई सर्वाधिक आकर्षक महिला बनाउने आधार हो। स्तम्भकार विक्रम राईका अनुसार माल्भिका सर्वाधिक आकर्षक महिलाका निम्ति 'डिजर्भ' गर्छिन्।
यस्तै निर्देशक निरक पौडेल भन्छन्- 'उनी स्टाइलिस्ट त छँदैछन्, उनको डिक्सन पनि उत्तिकै राम्रो छ।' पछिल्लो समयमा आफ्नै ब्रान्डका पहिरन नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएकी सुब्बा नेपाली महिलाका रूपमा विश्वभर पहिचान बनाउने महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढेकी छिन्।
पूर्वयुवराज पारस शाहकी अर्धाङ्गिनी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह पहिलो पटक आकर्षक महिलाका रूपमा उत्कृष्ट १० भित्र प्रवेश गरेकी हुन्। 'ब्युटिफूल' ट्याग उनलाई आकर्षक महिलाको सूचीमा राख्ने आधार बन्यो। पछिल्ला दिनमा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि हिमानीको सक्रियतालाई धेरैले मन पराएका रहेछन्। श्रीमान् पारस शाहसँग विभिन्न समयमा उतारचढावको जीवन बिताए पनि नेपाली नागरिकले स्नेह र सहानुभूतिको साथ सधैं हिमानीलाई दिने गरेका छन्। हिमानीले सामाजिक सेवाका लागि 'हिमानी ट्रस्ट' खडा गरेकी छिन्। एक अन्तर्वार्तामा हिमानीले आफ्नो रूप र सौन्दर्यप्रति खासै चासो नदिन आग्रह गर्दै आफू आममानिसझैं भएको बताएकी थिइन्।
लुट सफल चलचित्र हुनुअघि नै त्यसको आइटम गीत उध्रेको चोली लोकप्रिय भएको थियो। उध्रेको चोलीकी गायिका हुन्- इन्दिरा जोशी। केही समयअघि उनले गाएको अर्को गीत चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगर पनि नेपाली श्रोताले उत्तिकै मन पराएका थिए। आकर्षक शारीरिक बनावटका साथमा सुरिलो स्वरले इन्दिरालाई आकर्षक महिलाको सूचीमा पहिलो पटक प्रवेश गराउँदै तेस्रो स्थान दिलायो। उनको स्टेज पर्फर्मेन्स पनि दर्शकका लागि उत्तिकै आकर्षक मानिन्छ। नेपाली सकिराको ट्याग भिराइएकी इन्दिराले नेपाली ताराको पहिलो संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट गायिकाको उपाधि जितेकी थिइन्।
४ सपना मल्ल प्रधान
'बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल' सपना मल्ल प्रधानलाई परिभाषित गर्ने वाक्य हो। उनको बाहिरी रूपसँगै भित्री सौन्दर्यबाट पनि धेरै जना प्रभावित रहेछन्। खासगरी प्रधानले महिला हक-हितका निम्ति गरेको अतुलनीय योगदानबाट जनमानसको मन जितेकी छिन्। गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिलाएबापत सपना अमेरिकाको मार्गेट सेनार पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी थिइन्। सपनाले सन् २००८ मा लैंगिक समानताका लागि योगदान गरेबापत बहुचर्चित ग्रुबर अन्तर्राष्ट्रिय महिला पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेकी थिइन्। साडीमा सेक्सी देखिने मल्ल शारीरिक सौन्दर्यप्रति पनि उत्तिकै सचेत छिन्। उनी नियमित जिम जाने, सातामा एकपटक स्वीमिङ गर्ने बताउँछिन्।
५ केकी अधिकारी
नेपाली म्युजिक भिडियोकी क्विन हुन्- केकी अधिकारी। उनले सयौं म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। म्युजिक भिडियो हुँदै ठूलो पर्दामा अभिनय यात्रा थालेकी केकीको पहिलो चलचित्र स्वर सफल नभए पनि उनको नायिका छवि त्यही चलचित्रले निर्माण गरिदियो। केकीको अनुहारमा एक प्रकारको अपिलिंग छ। यो वर्ष प्रदर्शित चलचित्र मसानले पनि केकीको छविलाई अझै उजिल्यायो। सानो उमेरदेखि नै अभिनय यात्रा सुरु गरेकी केकी पढाइमा पनि अब्बल छिन्। उनले ब्याचलर इन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट उत्तीर्ण गरेकी छिन्। नेपाली चलचित्रमा उनी आशा गरिएको नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छिन्।
६ सदीक्षा श्रेष्ठ
सदीक्षा श्रेष्ठ मिस नेपाल २०१० की उपाधि विजेता हुन्। हँसिलो अनुहार, आकर्षक शारीरिक बनावटकी धनी सदीक्षा सुन्दर मात्र छैनन्, बौद्धिक पनि छिन्। पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा उनको क्रियाशीलता प्रशंसायोग्य छ। 'अहिलेसम्मका मिस नेपाल मध्येमा सदीक्षा मलाई ग्रेसफूल र स्माइलिङ फेस भएकी सुन्दरी लाग्छिन्,' विज्ञापन व्यवसायी रञ्जित आचार्यले भने-'मिस नेपालहरूमध्ये जिम्मेवार ढंगले आफ्नो टाइटलअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने पनि सदीक्षा नै हुन् जस्तो लाग्छ।' गायक बाबु बोगटीले सदिच्छा क्युट लाग्ने बताए। उनको चार्मिङ पर्सनालिटीलाई मन पराउने धेरै छन्।
७ आनीछोइङ डोल्मा
आनि छोइङको अनुहारमा सधैं निश्चल हाँसो भेटिन्छ। उनी गायनमा अब्बल त छँदै छिन्, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। सयौं बालबालिकालाई आफ्नै बलबुताले निःशुल्क शिक्षा एवं खानपीनको व्यवस्था गर्नु चानचुने कुरा होइन। मृगौला रोगीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनका लागि खर्चको जोहो गर्नु पनि साधारण कुरा होइन। त्यसमाथि फन्ड जुटाउन र आफ्नो गायन कला प्रस्तुत गर्न आधाभन्दा समय विदेशमा बिताउनुपर्ने बाध्यतामा पनि आनी छोइङ डोल्मा तनावमुक्त जीवन बिताइरहेकी छिन्। आफैं गाडी चलाएर हिँड्ने र पाँचतारे होटलहरूमा आफ्ना शुभचिन्तकलाई भेट्ने उनको शैली आम आनीको जस्तो पनि छैन। साप्ताहिकको १० आकर्षक महिलाको खोजीमा उनको सौम्य र सुन्दर शारीरिक बनावटको प्रशंसा गर्नेहरू उत्तिकै निस्किए। 'उनी आनी हुन्, तर उनको सुन्दरता कुनै विश्वसुन्दरीभन्दा कम छैन।' सर्वेक्षणमा सहभागी स्तम्भकार विक्रम राइले भने- 'आफूसँग सबै कुरा हुँदा पनि कुनै घमन्ड नभएकी यस्ती महिला नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सुन्दरी हुन्।'
सिपोरा गुरुङ भलिबलमार्फत चम्किएकी पोखरेली चेली हुन। अग्ली र हिस्सी परेकी सिपोरा पछिल्लो समय चलचित्र 'द घलेक साइन अफ लभ' मा नायिकाका रूपमा अनुबन्धित भएपछि उनको चर्चा अझ बढेर गएको छ। भर्खरै खेलकुद पत्रकार मञ्चले गरेको वर्ष पल्सर खेलाडीमा उत्कृष्ट खेलाडीसमेत घोषित भएकी यी १७ वर्षीया सुन्दरी राष्ट्रिय खेलमा दुई पटक उत्कृष्ट खेलाडीसँगै मोष्ट 'भ्यालुएबल' खेलाडी बन्न सफल भएकी थिइन्। ५ फिट ८ इन्च अग्लो उचाइले पनि उनलाई साथ दिएको छ। १२ वर्षकै उमेरमा साउथ एसियन खेलमा सहभागी भएर उनले आफनो टिमलाई तेस्रो स्थान दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइन्। भलिबलसँगै उनले एथलेटिक्समा समेत आफूलाई सफल खेलाडी बनाइन्। गुरुङ ब्युटीपार्लर एन्ड ब्युटी एकेडेमीकी ब्रान्ड एम्बेसडर सिपोरा चलचित्रमा अभिनय गर्नुलाई संयोग मात्र मान्छिन्। 'खेल नै मेरो जीवन हो,' उनले भनिन्, 'खेलबाट म अलग हुन सक्दिनँ।'
९ करिश्मा मानन्धर
'एभरग्रीन नायिकाको' छवि बनाएकी नायिका करिश्माको करिश्माटिक छवि अद्यावधि कायम रहेको धेरैले बताउँछन्। करिश्मासँग को-एक्टरका रूपमा काम गरेका युवा गायक बाबु बोगटी करिश्मा मानन्धरलाई बोल्ड फिगरको ट्याग लगाउँछन्। 'मैले बाल्य अवस्थामा देखेकि करिश्मा आज पनि उस्तै र अझ आकर्षक देख्छु, त्यो नै उहाँको सौन्दर्य जादु हो,' बाबुले भने- करिश्मा नेपाली चलचित्र उद्योगमा सबैभन्दा सफल नायिकाका रूपमा परिचित छिन्। रंगकर्मी सुनिल पोखरेल तथा कलाकार सीताराम कट्टेलका अनुसार करिश्मा मानन्धर सदावहार, चार्मिङ पर्सनालिटी भएकी व्यक्ति हुन्।
१० रविना देशराज श्रेष्ठ
बैंकिङ क्षेत्रमा माथिल्लो पदमा पुग्ने थोरै महिलामध्येकी एक हुन् रविना जोशी। हाल उनी मेगा बैंकमा कार्यरत छिन्। बैंकिङ करियरमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेकी रविनाले दुई दशकअघि तत्कालीन गि्रन्डलेज बैंक अर्थात् अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेकी थिइन्। उत्कृष्ट शारीरिक सौन्दर्य उनको अर्को आकर्षक पक्ष हो। रविना अल्टरनेटिभ हिलिङ प्राक्टिसेजकी ज्ञाता पनि हुन्। उनी समाजसेवामा पनि उत्तिकै रुचि राख्छिन्। शुभचिन्तकहरूका अनुसार उनी सफल बैंकर्स, व्युटिफुल वुमन र राम्रो सिंगरसमेत हुन्। सौन्दर्य र व्यावसायिक जीवनलाई सन्तुलित ढंगले डोर्‍याउन सफल रविना बढ्दो उमेरमा पनि आकर्षक देखिन्छिन्।
१ सौगात मल्ल
सर्वाधिक आकर्षक पुरुषमा सौगात मल्लले बाजी मार्नुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। पहिलो उनी अभिनीत चलचित्र 'लुट' को सफलता हो भने दोस्रो उनको फरक किसिमको शारीरिक बनावट अनि तेस्रो अभिनय गर्न सक्ने प्रचुर क्षमता। नवलपरासीबाट अभिनय पढ्न आएका यी नायक अरूजस्तो हिप्पोक्र्याट छैनन्। उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार 'चलचित्र हिट हुँदा पनि आफ्नै दुनियाँमा बिन्दास रहने अचम्मको स्वभाव छ सौगातमा।' गुरुकुलको रंगमञ्चमा एकल प्रस्तुति दिएर वाहवाही कमाएका सौगात चलचित्रमा पनि सफल भएपछि उनको चर्चा अझ चुलिएको छ। उनलाई यो पटकको सर्वेक्षणमा चलचित्र क्षेत्रकाले मात्र होइन, बाहिरकाले पनि उत्तिकै मन पराएका थिए।
२ गगन थापा
स्पष्ट बोल्ने शैली र आकर्षक व्यक्तित्व उनी नियमित रूपमा उत्कृष्ट १० आकर्षक पुरुषमा छनौट हुने आधार हुन्। नेविसंघको केन्द्रीय महामन्त्री भएपछि थापाको लोकप्रियता एकाएक चुलिएको थियो। वि.सं. २०३३ सालमा काठमाडौंको प्रसूति गृहमा जन्मिएका गगनको बाल्यकालको केही समय सिन्धुपाल्चोकमा बितेको थियो। युवापुस्ताका नेतामा सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति गगन थापा नै हुन्। वैचारिक बहसमा पनि प्रखर थापालाई बौद्धिक र सुन्दर अनुहारको संगमका रूपमा सहभागीहरूले प्रशंसा गरे। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् थापा युवापुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्।
३ राजेश हमाल
पाल्पा, तानसेनमा सन् १९६४ जून ९ तारिखमा जन्मिएका हमालको आकर्षक व्यक्तित्वले उनको उचाइलाई बढाएको छ। त्यतिमात्र होइन, उनको तर्कसंगत संवाद गर्ने शैलीले उनलाई बौद्धिक व्यक्तिको परिचय पनि दिएको छ। पहिलो सफल चलचित्र युगदेखि युगसम्मबाट करियर सुरु गरेका राजेश हमालले अभिनय गरेका सबै चलचित्र सफल नभए पनि उनको टाउको भने चलिरह्यो। रहस्यमयी छवि बनाएका राजेश हमाल नेपाली परिवेशमा 'रियल सेलिब्रेटी' लाग्छन्। नेपाली चलचित्र हेर्ने र नहेर्ने सबैमाझ उनको व्यक्तित्व लोकप्रिय छ। राजेशले चण्डिगढस्थित पंजाब विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर पूरा गरेपछि मोडलिङ र अभिनयमा भाग्य अजमाउने निर्णय गरेका थिए।
४ अनिल शाह
नेपालका सर्वाधिक सफल बैंकर्स मानिने अनिलको टल एन्ड हेन्डसम फिगरका कारण सहभागीहरूले उनलाई आकर्षक व्यक्तित्वका रूपमा छनौट गर्दै आएका छन्। तत्कालीन गि्रन्डलेज बैंक अर्थात् हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट करियर विकास गरेका अनिलले नबिल बैंकमार्फत सफल बैंकर्सको परिचय बनाएका थिए। बैंकर्स अफ दि इयरको पुरस्कारको हकदार बनेका अनिल हाल मेगा बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अनिलले दिल्ली युनिभर्सिटीवाट फाइनान्स एन्ड मार्केटिङमा एमबीए र वासिङ्टन युनिभर्सिटीबाट इन्टरनेसनल बिजनेस फाइनान्समा बीबीए गरेका हुन्।
५ डा. बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई २०२६ को एसएलसी परीक्षाका बोर्ड प्रथम हुन्। पढाइमा समकालीनले उनलाई कहिल्यै उछिन्न सकेनन्। संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उनले प्राप्त गरेको मतले अरूलाई पछि पार्‍यो। यद्यपि 'आकर्षक पुरुष' मा भने भट्टराई पहिलो हुन सकेनन्। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका डा. भट्टराईले 'द नेचर अफ अन्डरडेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल' विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री रहँदा उनको चुलिएको लोकप्रियता प्रधानमन्त्री बनेपछि भने केही धुमलिएको छ। उनी प्रधानमन्त्री भए देशले परिवर्तन महसुस गथ्र्यो भनेर सोच्नेहरू अहिले उनले पनि तात्त्विक भिन्नता दिन नसकेकोमा आश्चर्यमा छन्। 'मेरो बुझाइमा डा. भट्टराई सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर परिवर्तन ल्याउने प्रयासमा छन्,' -माल्भिका सुब्बाले भनिन्। पाँच दशकको जीवनयात्रा पछि पनि भट्टराईको शारीरिक फिटनेस कायमै छ।
६ निमा रुम्बा
निमा रुम्बा नेपाली पप संगीतमा सर्वाधिक आकर्षक गायकका रूपमा चिनिन्छन्। वेस्टर्न शैलीको गेटअप र रक पप प्याटर्नका म्युजिकले पनि उनी नेपाली युवा मनका ढुकढुकी बन्न पुगे। निमाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेकै उनको गीत अनि परफर्मेन्सको छुट्टै शैली हो। निमाको शारीरिक सौन्दर्यबाट लटि्ठनेहरू पनि उत्तिकै छन्।
७ भूषण दहाल
म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री, फिल्म र टक शो सबै विधामा अब्बल भूषण सधैं फिट एन्ड फाइन देखिन्छन्। कद केही होचो भए पनि आकर्षक व्यक्तित्वका निम्ति भूषण सदैव सचेत देखिन्छन्। टक शो 'फायर साइड' का प्रस्तोता दाहालको स्कार्फ लगाउने शैलीले उनलाई अझ आकर्षक बनाएको छ। बहुप्रतिभाशाली दाहालले कुनै बेला नेपाल टेलिभिजनमा २० रुपैयाँ ज्यालादारीमा काम गरेका थिए। उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एमए गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनमा सन्डे पप कार्यक्रममार्फत उनी युवापुस्तामाझ लोकप्रिय भएका थिए। उनले निर्देशन गरेको चलचित्र 'कागबेनी' ले प्राविधिक रूपमा नेपाली चलचित्र उद्योग नयाँ ट्रेन्ड दिएको मानिन्छ। भूषण दाहाल हाल कान्तिपुर टेलिभिजनसँग सम्बद्ध छन्।
७ रमेश खरेल
अजय देवगन अभिनीत हिन्दी चलचित्र 'गंगाजल' र 'सिंघम' को नायकी छवि नेपाल प्रहरीका एसपी रमेश खरेलसँग मिल्दो भनेर बुझिएको छ। सुशासनका निम्ति कटिबद्ध खरेल रिलमा होइन, रियल लाइफमै गुन्डागर्दीविरुद्ध जोखिमपूर्ण खेल खेल्छन् र जित्छन् पनि। धेरै सहभागीले यस्तै आधार देखाएर उनलाई आकर्षक व्यक्तित्वमा सामेल गरे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एक कार्यक्रममा गच्छदारले 'पचहत्तरै जिल्लामा रमेश खरेल जन्माउँछु' भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि 'प्रहरी हुनु त खरेलजस्तो' भनेर प्रयोगकर्ताहरूले प्रशंसा गरेका छन्। पोखरामा रहँदा होस् वा काठमाडौं तथा वीरगन्जकै किन नहोस्, खरेल सधैं आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भए। राजनैतिक संरक्षणमा संगठित गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई पनि खरेलले छाडेनन्। नेपाली चलचित्र 'बजार' मा समेत खरेलको नायकी भूमिकालाई प्रस्तुत गरिएको छ। रमेश खरेलको शारीरिक व्यक्तित्व पनि उत्तिकै आकर्षक भएको गायिका आस्था बीले बताइन्।
८ सुरजसिंह ठकुरी
'कल कान्तिपुर' का हिरो सुरजसिंह ठकुरीको फ्यान फ्लोइङ पनि उत्तिकै लोभलाग्दो छ। कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष सांगीतिक कार्यक्रम चलाउने निर्णय भएपछि भूषण दाहालले जुराइदिएको कल कान्तिपुर सुरजका लागि राम्रैसँग फापेको छ। सुरज जस्तोसुकै गेटअपमा पनि आकर्षक देखिने भएकाले युवतीहरू उनीप्रति मोहित हुन्छन्। आदर्श विद्या मन्दिरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सुरज अध्ययनमा मेधावी भएकैले उनको परिवारले उच्च शिक्षाका लागि उनलाई भारतको मसुरी पुर्‍याएको थियो। वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका सुरजले कान्तिपुर अघि च्यानल नेपालमा काम गरेका थिए। सुरजले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुका साथै दर्जनौं भिडियोको निर्देशन एवं थुप्रै विज्ञापनमा अभिनय पनि गरेका छन्।
९ सागर थापा
नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापाले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपबाट नायकको छवि बनाए। वंगलादेशविरुद्ध गोलरहित खेलको अन्तिम चरणमा सागरले गरेको गोल निर्णयक मात्र थिएन, विश्व फुटवल इतिहासकै एउटा सुन्दर गोल पनि थियो। सागरकै कप्तानीमा नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल यात्रा तय गर्‍यो भने १८ वर्षपछि बंगलादेशलाई पराजित गर्‍यो। सागर हिमालयन शेर्पा क्लबमा आबद्ध छन्। २५ वर्षीय सागर नेपाली फुटबलकै सर्वोत्कृष्ट डिफेन्डर हुन्। १० वर्षअघि फ्रेन्ड्स क्लबबाट व्यावसायिक खेल जीवन प्रारम्भ गरेका सागरसँग ३५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव छ। कुनै बेला १ सय ७० औं स्थानमा रहेका नेपाल अहिले फिफाको र्‍याङ्किङमा १ सय ३६ औं स्थानमा छ।
१० सुरज वैद्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्य साँच्चै हेन्डसम छन्। उनको हेन्डसम व्यक्तित्व र कुशल शैलीमा बोल्ने तरिका नायिका करिश्मा मानन्धरलाई पनि मन पर्दो रहेछ। उद्योग वाणिज्य महासंघमा दर्‍है प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी भएका सुरजले वैद्य अर्गनाइजेसनमार्फत थुप्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आफ्नै कम्पनीमार्फत उत्पादन तथा ट्रेडिङ बिजनेस गर्दै आएका वैद्य आकर्षक भएरै हुनसक्छ, उनलाई मिस इन्डिया ऋतुसिंहले मन पराएकी थिइन्। अध्ययनका क्रममा भारत पुगेका सुरजले ऋतुसँग प्रेमविवाह गरेका थिए। सुरज वैद्य अर्गनाइजेसनमार्फत सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्।